मन्दिर जाँदा सावधानी अपनाउनूहोस्,को रोनाको खतरा हुन सक्छ – डा. पुन – Jagaran Nepal
मन्दिर जाँदा सावधानी अपनाउनूहोस्,को रोनाको खतरा हुन सक्छ – डा. पुन
काठमाडौं। साउन महिना हिन्दूहरूका लागि विशेष समय। यो महिनामा विशेषतः भगवान शिवको पूजा आराधाना गरिन्छ। हरेक सोमबार ब्रत बसेर पूजाआजा गर्दा मनोकामना पुरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ।
मठमन्दिरहरूमा गएर पूजा गर्ने प्रचलन छ। यो वर्ष साउने ब्रतका लागि अलि समस्याग्रस्त हुनसक्छ। विश्वव्यापी को रोना म हामारीका कारण यस्तो समस्या देखिन सक्छ। मन्दिरमा बढी भीडभाड हुने हुँदा को रोना भा ईरसको सं क्रमण हुने खतरा बढी हुन्छ।
त्यस कारण मन्दिरमा जाँदा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने सं क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनको सुझाव छ। “साउन महिनामा बिशेषत भगवान शिवको पूजाआराधना गरिने र मन्दिरहरु जाने प्रचलन बढी हुन्छ। भीडभाडको सम्भावना बढी हुने भएकोले व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने र मास्क अनिवार्य लगाउने गरौं।” डा. पुनले भने।
को रोना सं क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न आफैं सचेत र सतर्क हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ ध्यान दिन सबैलाई आग्रह गरे। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा को रोना सं क्रमतिको संख्या बढ्दै गइरहेको भन्दै उनले साउन महिनामा मन्दिरहरूमा जाँदा भीडभाड कम गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए।
“मन्दिरमा भीडभाड बढी गर्दा खतरा हुन सक्छ। त्यहाँ खाली खुट्टा हिड्ने, मन्दिरमा जथाभावी हातले छुने जस्ता काम हुन्छन्। जुन को रोना सं क्रमणका लागि खतरा हुनसक्छन्।” डा. पुनले भने।